Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanavaozana indray ao amin'i Dorothy Dandridge | Halle Berry & Cloud Atlas - Fikarohana Reincarnation
Proposed by: Walter Semkiw, MD, 2002
Voamarina Ny Fanahy Ahtun dia ao amin'ny sehatry ny Ryerson-Semkiw
From: Fiverenan'ny revolisionera & Teraka indray tamin'ny International Edition
Rehefa nandeha lavitra be i Halle Berry mba hanao sarimihetsika momba ilay mpilalao sarimihetsika Dorothy Dandridge, dia ara-dalàna ny fiheverana fa mety ho ny fiverenan'i Dorothy indray ao amin'ny vovoka indray i Halle. Io teoria io dia nanohana azy noho i Halle sy i Dorothy manana endrika mitovy endrika. Apetraho eo an-kavanana ny cursor anao eo amin'ny sary ary ampidino ny solaitrao mba hivezivezy eo amin'ny sary. Tao anatin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanamafy ny lalao an'i Dorothy Dandridge i Ahtun Re Halle Berry.
Ity tranga ity dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny fanahy miverimberina hanatanteraka tanjona iray. Dorothy Dandridge dia nodimandry ny volana septambra 8, 1965; raha toa i Halle Berry dia teraka tsy herintaona taty aoriana, tamin'ny volana 14, 1966. Dorothy sy Halle dia samy teraka tany Cleveland, Ohio. Tao amin'ny 1954, i Dandridge dia notendrena ho Oscar noho ny andraikiny Carmen Jones, saingy tsy nahazo ny loka izy, amin'ny ampahany satria nanavakavaka ny Afrikana amerikana tamin'ny Hollywood tamin'izany fotoana izany. Raha ny Halle Berry, tamin'ny Martsa 2002, dia nahatratra ny tanjony i Dorothy Dandridge tamin'ny nahazoany ny Oscar ho mpilalao sarimihetsika tsara indrindra.
Fifandraisana amin'ny fiainana taloha: tovovavy iray niaviana tamin'ny fihodinana roa
Ny tena mahavariana amin'ity tranga ity dia ny fisakaizana iray niaretana nandritra ny androm-piainany roa. Rehefa nanao ny sarimihetsika momba an'i Dorothy Dandridge i Halle dia lasa mpinamana tamin'i Geri Branton, iray amin'ireo mpiara-miasa amin'i Dorothy Dandridge, izay 70 taona teo ho eo tamin'izany. Nandritra ny tafatafa iray, nanamarika i Branton fa tsy mitovy amin'ny Dandridge sy Berry. Hoy izy:
"Mahavariana izany, ary tena manao izany izy (mampiseho an'i Dandridge)." Nihoron-koditra i Berry rehefa nanontaniana i Branton hoe ahoana no tena itiavan'i Dandridge azy. "Heveriko fa manjombona ny fiainan'i Halle amin'ny maha-iray azy", hoy i Branton. "Geri, shhh," hoy i Berry. Saingy niasa tany aloha i Branton. "Olona mahafinaritra izy ireo, tsara tarehy avy any ivelany, fa amin'ny ankapobeny. Feno hatsaram-panahy sy mahafinaritra. "" Tsy mampino izany. Ary rehefa nahita an'i Halle aho tamin'ny voalohany, dia nesorina aho, tena noraisina. Tena toy izany tokoa izy ireo. "
Halle Berry tenany mihitsy no nilaza fa ny fiainany dia mampitovy ny fiainan'i Dandridge: "Ho any Hollywood, te ho lasa vehivavy lehibe iray ianao ary mahatsapa ho toy ny vehivavy manan-danja fa ao amin'ny orinasa izay tsy misy toerana ho antsika. Ny tolona ataoko dia tena be herim-po, miezaka mamolavola ny entana ho ahy amin'ny maha-vehivavy lehibe ahy. Ary na dia nanokatra ny varavarana ho ahy aza izy, satria tsy fantany tamin'ny fomba tokony ho azy, dia mbola eo amin'ny toerana mitovy amin'izany ihany aho. "
Saingy taorian'ny alina Oscar 2002, tsy marina intsony izany. Tamin'io tranga io, Halle Berry no Amerikana voalohany Amerikana nahazo ny Oscar ho mpilalao sarimihetsika tsara indrindra.
Fanahy ary zava-mitranga tsy mihoatra ny natoraly
Nisy zavatra mahaliana nitranga momba an'i Halle Berry sy Dorothy Dandridge, araka ny tatitry ny 2003. Rehefa manao ilay sarimihetsika, Fampahafantarana an'i Dorothy Dandridge, Nahazo akanjo iray izay an'i Dorothy i Halle, izay nitazona azy tao an-davaka. Ho fiarovana, napetraka tamin'ny taratasy sy plastika ilay akanjo. Andeha hojerentsika ny halehiben'i Halle Berry:
"Indray alina aho dia tao an-trano niaraka tamin 'ny fisotroan-divay iray ary nandre izany feo mitabataba rehetra izany izahay. Tamin'ny voalohany, nihevitra aho fa rano rano mangitsokitsoka avy amin'ny teapot, avy eo dia tsapako fa avy tao amin'ilay efitrano izy, ary nitifitra ilay taratasy teo amin'ny akanjo-ny rehetra! Ny namako sy izaho dia nanosika ny ampondra haingana avy teo! "
"Nisy zavatra hafa hafahafa nitranga tao an-trano raha mbola nanao an'io akanjo io aho. Tonga tany an-trano aho ary nilaza ny tranon'ireo mpikarakara fa efa nandre ny sezako fotsiny izy. Ary ny varavarankely nataonay dia manidina mivantana. Tsy mivazivazy aho. Rehefa sarimihetsika Fampahafantarana an'i Dorothy Dandridge dia tapitra hatreto, te-hitazona mafy ny akanjony aho, saingy tsy maintsy nandeha izy. Ary dia tsara daholo ny zava-drehetra. "
Halle Berry dia nandika ireo dingana ireo tamin'ny fanombanana fa tao an-tranony i Dorothy Dandridge. Tsy mazava hoe inona no nahatonga ireo fisehoan-javatra psychokinetic ireo hitranga. Angamba izany ny fanahin'i Halle, na ny an'ny mpitarika fanahy, izay niezaka nanome azy ny hafatra. Afaka mianatra bebe kokoa momba ny fisehoan'ny psychokinétique amin'ny tranga vao teraka ny viriosy Uri Geller, izay hita ao amin'ny Fiverenan'ny revolisionera ary ateraka indray.
Cloud Atlas, Halle Berry ary ny vatana vaovao
Halle Berry dia naseho tao amin'ny sarimihetsika Cloud Atlas, izay mifototra amin'ny tantara misy ny anarana mitovy nosoratan'i David Mitchell. Mitchell dia nilaza momba ilay boky: "Ny tarehin-tsoratra rehetra [mitarika] dia vatana vaovao ao amin'ny fanahy iray ihany… fantatra amin'ny marika nahaterahana." (1)
David Mitchell dia tokony hahatsapa ny asan'ny Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia, izay nanamarika fa matetika ireo olona maty noho ny ratram-po, toy ny antsy na ratra amin'ny bala, dia nahitana mari-pahaterahana na maratra eo amin'ny toerana misy ny ratra mampivarahontsana. ny fahatongavana ho nofo.
Halle Berry dia mahafantatra ny fiainana efa natolony ho Dorothy Dandridge taloha. Satria ny porofon'ny fanambadiana amin'ny vatana vaovao indray dia aparitaka amin'ny mpihaino sy sarimihetsika marobe toa ny Cloud Atlas hitondra ny lohahevitry ny vatana vaovao ao amin'ny vatana vaovao indray, hitombo ny fitantarana momba ny fiverenan'ny vatana vaovao.
Fitsipika momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao sy eo ambanin'ny fiainana taloha
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Ny endriky ny endriky ny Halle Berry dia mifanaraka tsara amin'ny an'i Dorothy Dandridge.
Innate Talent: Naverin'i Halle ny talentany tao Dorothy Dandridge ary nahazo ny loka Akademia ho an'ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra, ary nanatanteraka ny tanjon'ny fiainana taloha.
Fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanambadiana: Ny fiorenan'i Dorothy Dandridge indray vao teraka indray tamin'ny naha-namana akaiky azy, Geri Branton, izay nahita ny fitoviana goavana teo amin'i Dorothy sy Halle, amin'ny endriny, ny toetrany ary ny fifandraisana.
Fomba fanao isan-taona: Teraka tany Cleveland, Ohio i Halle, toa an'i Dorothy.
Ny Fanahy Mitarika: Rehefa nanao ny sarimihetsika tao Dorothy i Halle, dia nitazona ny akanjon'i Dorothy tao amin'ny lavany izy, izay nifandray tamin'ny fisehoan'ny psychokinétique.
Affiner Affinity: Namoaka sy nibanjina ny sarimihetsika i Halle Berry Fampahafantarana an'i Dorothy Dandridge, ka miseho toy ny fiainany taloha ihany.
1 "Bookclub". BBC Radio 4. 2007-06. Nentina tamin'ny 2008-04-19.